नेपाली अमेरिकन अगुवा मोहन ज्ञवालीलाई कम्युनिटी सर्भिस अवार्ड – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ आश्विन २०७७, आईतवार ००:५१ English
नेपाली अमेरिकन अगुवा मोहन ज्ञवालीलाई कम्युनिटी सर्भिस अवार्ड
न्यूयोर्क । अगुवा नेपाली अमेरिकन एवं एनआरएनए अभियन्ता मोहन ज्ञवाली कम्युनिटी सर्भिस अवार्डबाट सम्मान्नित भएका छन् । रिजउड डेमोक्रेटिक क्लवको आयोजनामा न्यूयोर्क स्टेट एसेम्ब्लीका तर्फबाट एसेम्बी मेम्बर क्याथेरिन नोलान एवं न्यूयोर्क सिटी काउन्सिलका तर्फबाट काउन्सिल मेम्बर डोनोभान रिचार्ड्सले ज्ञवालीलाई सम्मान गरेका हुन् ।
उनको साथमा कंग्रेसम्यान ग्रगोरी डब्लु मिक्स, मदजुर नेता एवं सामुदायीक अभियन्ताहरु हेक्टर फिगुएरोवा, जोसेफ जेइजर, माइकल जे. पलाडिनो, ब्रिआना मुलिगान, थोमस सी गुड्ढार्ट, बिनजेश समुदायका अधिवक्ता मेलिसा वोर्लान्डो पनि सम्मान्नित भएका छन् । रिजउड डेमोक्रेटिक क्लवको १११ औँ जनजयन्तीको अवसर पारेर गत जुन १३ मा आयोजित रात्रीभोजमा उनीहरुलाई सम्मान्नित गरिएको हो ।
कार्यक्रममा एसेम्ब्ली मेम्बर नोलान् एवं न्यूयोर्क सिटी काउन्सिलका पूर्व काउन्सिल मेम्बर क्राउलीले ज्ञवालीले स्थानीय नेपाली समुदायमा पुर्याएको योगदानको सदैव उच्च कदर हुने बताएका थिए । राज्यका गभर्नर एन्ड्रु कुम्बोका प्रतिनिधी हर्ष पारेखले नेपाली भाषामा ड्राइभर लाइसेन्स परिक्षा दिन पाउने व्यवस्थाका लागि ज्ञवालीले गरेको मेहनत स्मरण गरेका थिए । ज्ञवालीकै अथक प्रयासका कारण अहिले न्यूयोर्कमा नेपाली भाषामा ड्राइभिङ लाइसेन्स जाँच दिन पाइएको उनको भनाइ थियो ।
अवार्ड ग्रहण गर्दै ज्ञवालीले नेपाली अमेरिकी समाजबाट आफुले पाएको प्रेरणा र उर्जाकै कारण सम्मान हासिल गर्न सफल भएको बताउका थिए । उनले आफुलाई निरन्तर प्रोत्साहित गर्ने हिमालयन डेमोक्रेटिक क्लव र द रोटरी क्लव अब न्यूयोर्क ‘क्वीन्स’का सहकर्मीहरुलाई बिशेष धन्यवाद दिएका थिए ।
८ असार २०७६, आईतवार ०१:५५ मा प्रकाशित
अमेरिकामा एकैदिन एक हजार ५९२ को मृत्यु	१४ श्रावण २०७७, बुधबार २२:०१